E Buliela Prosper Amah n'Ọkwa Bishọọpụ Ndị Ọgbaru
Dịka a sị na o kwesiri onye mee mma e mee ya mma, e buliela ma guzobela onye ozi Chineke ahụ na-ewu ewù na mba ụwa, bụ Prosper Afamefuna Amah dịka Bishọọpụ ọhụụ nke ụka Anglịkan na Dayọsiisi Ọgbaru nke steeti Anambra.
Nnukwu mmemme nguzobe n'ọkwa ahụ bụ nke weere ọnọdụ n'ụlọ ụka ''Basilica of Saint James the Great Cathedral Atanị'' ụbọchị Satọdee gara aga, ma bụrụkwa nke dọtara imirikiti mmadụ sitere n'ebe dị iche wee bịa iji anya ha hụ ka e doro ya bụ onye nke Chineke n'ọkwa ahụ dị oke elu. Nguzobe n'ọkwa ahụ bụ nke e mere kpọnkwem site n'aka 'Achbishop Metropolitan' na 'Primate' ụka Anglịkan n'ala Nigeria, bụ 'Most Reverend' Nicholas Okoh, ma bụrụkwa nke a nọrọ na ya wee kọwaa ya bụ nwa amadi Prosper Amah dịka onye tozuru oke nke ukwu nakwa onye Chineke jiri aka ya họpụtara onwe ya maka ijere ya ozi.
Na nkenke okwuchukwu ya n'ofufe nro mmemme ahụ, maazị Amah, bụ onye obi jupụtara n'ọñụ kelere Chineke maka ịhụta ya mma na ibuli ya elu n'ije ozi ya dịka onye mgbasa ozi ọma. O chetaara ọhanaeze ndị bịara mmemme ahụ na ọ bụ naanị Chineke na-enye nzọpụta, dụọ ha ka ha ghara ikwe ka ihe ọbụla kewaa mmekọ ha na Chineke, ma kpọkuziekwa ndị aka ji akụ ka ha na-etinye ego ha n'ịgbasa ozi ọma na inyere ndị nọ na mkpa aka.
N'okwu nke ya na mmemme ahụ, aka na-achị steeti Anambra, bụ gọvanọ Willie Obianọ, nke onye nọchitere anya ya bụ ode akwụkwọ izùgbe nke steeti ahụ, bụ ọkammụta Solo Chukwulobelụ toro ya bụ bishop maka mbuli n'ọkwa ya, ma kpee ka Chineke nye ya amara na ihuọma n'ije ozi ya na mgbasa ozi ọma.
O kwupụtanworo njikere nke ọchịchị steeti ahụ dị n'ijikọ aka ọnụ, ha na ndị ụka, kọwaa ya dịka nke mịtagoro ọtụtụ mkpụrụ, ma kwekwa nkwà ime ka ya bụ mmekọrịta siwanye ike ma gawanye n'ihu.
N'ịtụkwara ya bụ bishọọpụ ọhụụ mmamma, onye nọbụrụ dịka bishọọpụ nlekọta nke Dayọsiisi ahụ tupuu sepuzie aka, ma bụrụkwa Bishọọpụ ụka Anglịkan na Dayọsiisi Agụata, bụ bishọọpụ Samuel Chukwudị Ezeọfọ kpekwara ka Chineke nye ya bụ bishọọpụ ọhụụ amara ma mee ka otite mmanụ ya bawanyere ya ụba n'ije ozi ya n'ọkwa ọhụụ ahụ.
Mmemme ahụ dọtara imirikiti ndị bishọọpụ na ndị ọrụ uka sitere Dayọsiisi dị iche iche n'ala Nigeria, ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu, ndị kọmishọna, ndị ji ọkwa ọchịchị dị iche iche, ndị otu Night, na ọtụtụ ndị ọzọ.